::ဓ မ္မ စ ကား နေ့ တိုင်း ကြားက၊ စိတ် ထား ဖွေး လက် သိ ဥာဏ် ထက် ၏::: အသေအချာမသိဘဲ နဲ့ ဘာလို့များတဖက်သားကိုစွပ်စွဲချင်ရတာလဲ
အသေအချာမသိဘဲ နဲ့ ဘာလို့များတဖက်သားကိုစွပ်စွဲချင်ရတာလဲ
ကုရုတိုင်းက တံခါးစောင့် ငါးပါးသီလ ကို အလေးအနက်အထွတ်အမြတ်ထားပြီး ဂရုတစိုက်ကျင့်သုံးပုံကလည်း ကြည်ညို လေးစားစရာ ကောင်းပါတယ်။
တစ်ခုသောညနေချမ်း မြို့တံခါးပိတ်ချိန်မှာတံခါးစောင့်က တံခါးပိတ်တော့မယ့်အကြောင်း သုံးကြိမ်ကြွေးကြော် လိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ မြို့ အပြင်ဘက် ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေ သူဆင်းရဲတစ်ယောက် နဲ့ မိန်းမပျိုလေး တစ်ယောက် မြို့ထဲဝင်ဖို့ အူယားဖားယား ပြေးလာပါတယ်။
တံခါးစောင့်လည်း နောက်ကျမှ အပေါက်ဝရောက်လာတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ကို စိတ်ပေါက်ပေါက် နဲ့ ဟောက်ချလိုက်ပါတယ်။ ”ဘာလို့ ဒီလောက်တောင်နောက်ကျနေကြရတာလဲ၊ ဒါမင်းမဲ့တိုင်းပြည်မဟုတ်ဘူး၊ ဒီတိုင်းပြည်မှာ ရှင်ဘုရင်ရှိတယ်၊ ဒီအချိန်မှာ မြို့တံခါးပိတ်တယ်ဆိုတာ မသိကြဘူးလား။ ကိုယ့်မယားနဲ့ကိုယ်
တောထဲမှာ စည်းမရှိကမ်းမရှိ ပျော်ပါးချင်တိုင်း ပျော်ပါးပြီး အခုမှ ပြန်လာရသလား၊ နောက်ကျတဲ့ ပေါက်ကရတွေ အပေါက်ဝမှာ ကျောက်ချထားလိုက်ရလို့။”
တံခါးစောင့်ရဲ့ စကားအဆုံးမှာ သူဆင်းရဲက အခုလို ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။
”အို...တံခါးမှူးကြီးခင်ဗျာ.. ဒါကျနော့်မယားမဟုတ်ပါဘူး. ကျနော့် နှမ(ညီမ)ပါ။ တောထဲထင်းခွေသွားတာပါ။ ကျနော်တို့မောင်နှမက ဆင်းရဲလွန်းလို့ ထင်းခွေစားရတာပါခင်ဗျာ”
ထင်းခွေယောကျာ်းသူဆင်းရဲသားလေးရဲ့ ဖြေရှင်းချက်လည်းကြားရရော တံခါးစောင့်ခမျာ အကြီးအကျယ် ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်သွားပါတယ်။
”အို..ဘုရား..ဘုရား.. ငါတော့အမှာကြီးမှားပါပကောလား။ မယားမဟုတ်တဲ့ နှမအရင်းခေါက်ခေါက်ကို မယားလို့စွပ်စွဲမိပြီ၊ တစ်ဖက်သားအကြောင်းသေချာမသိဘဲနဲ့ ရမ်းသမ်းစွပ်စွဲမိတဲ့အတွက် ငါတော့ မုသာဝါဒကံ ထိုက်ပြီထင်ပါရဲ့”ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ငါးပါးသီလအပေါ် စိတ်မသန့်ဖြစ်နေပါတယ်။
တကယ်တော့သူတစ်ပါး အကျိုးပျက်စီးလိုတဲ့စိတ်၊ သူတစ်ပါးဂုဏ်သတင်း ညှိုးနွမ်းစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့ တမင် သက်သက် လိမ်ညာညဏ်ဆင်ပြီး စွပ်စွဲပုတ်ခတ်တာမှမဟုတ်ဘဲ။ တကယ်မသိလို့ မှာဆူ. မှားငေါက်မိတာ ဘာကံမှမထိုက်ပါဘူး။
ပြောပြစရာအပြစ်ဆိုလို့ အပြစ်မဟုတ်တဲ့ ဒါလေးပဲရှိတဲ့ တံခါးစောင့် ရဲ့ ငါးပါးသီလ ကိုမှ ဂရုဓမ္မ လို့မပြောရင် ဘယ်သူ့ ငါးပါးသီလ ကို ဂရုဓမ္မ လို့ ပြောဦးမှာလဲ။
ကောက်နှုတ်ချက်။ ။ (အရှင်ဆန္ဒာဓိက ၏ လောက၌အကောင်းဆုံးသောအရာ)
Posted by ယူဆဂိ at Wednesday, May 23, 2007
Labels: အသေအချာမသိဘဲ နဲ့ ဘာလို့များတဖက်သားကိုစွပ်စွဲချင်ရတာလဲ
အခက်ကြီး ၃ ပါး
ပဌာန်း ဒေသနာတော်ကြီး သုံးသပ်ရွတ်ဖတ်ခြင်း အကျိုး
အသေအချာမသိဘဲ နဲ့ ဘာလို့များတဖက်သားကိုစွပ်စွဲချင်ရတ...
မိ မိ နောက် သို့ မည် သည့် အ ရာ လိုက် လို သ နည်း
အထီး ကျန် ရင် အ ကျည်း တန် တယ်
တွေ့ ဆုံ ကြုံ ကွဲ
အသေကြီး နဲ့ အသေလေး